China Exciter rụpụta na Factory | Akụrụngwa Chengxin
A na-ejikọta excibration vibration na ụfọdụ igwe na akụrụngwa iji mepụta ike mmụọ, bụ akụkụ dị mkpa nke iji ọrụ ọrụ igwe. Ihe na-eme mkpọtụ nwere ike ime ka ihe ahụ nweta otu ụdị na ogo nke ịma jijiji, ka o wee nwee ike iji mezuo ịma jijiji na nyocha ike na ihe ahụ, ma ọ bụ dozie ngwa ọrụ nyocha na ihe mmetụta. A pụkwara iji ihe na-eme mkpọtụ dị ka ihe na-akpali akpali iji mepụta igwe vibration, nke nwere ike ịmata njem, nyocha, nchịkọta, ịkpụzi na tamping nke ájá ájá na gravel. Dị ka ụdị ntụrụndụ dị iche iche si dị, a ga-ekewa ihe na-akpali akpali na ụdị eletriki inertia, ụdị electromagnetic, ụdị electro-hydraulic, ụdị pneumatic na ụdị hydraulic. Onye na - eme ọiterụ nwere ike ịmepụta enweghị atụ ma ọ bụ multidirectional, harmonic ma ọ bụ ike anharmonic excitation.
Enweghi obi uto
A na-eji ngọngọ eccentric iji mee ka ike nwee ume. Ihe na-eme ka ikuku na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-enweghị atụ (Fig 1 [atụmatụ eserese nke inertial vibration exciter with unidirectional excitation force]) bụ nke a na-ejikarị arụ ọrụ abụọ na-agbagharị na otu ụzọ na ọsọ ọsọ nke 1. Ogwe abụọ ahụ na-agagharị na nke ọzọ direction na otu ọsọ.
Ihe mgbochi abụọ eccentric dị na axis na-emepụta ike nke ike na-akpata na nduzi Y. Mgbe ị na-arụ ọrụ, a na-etinye exciter ahụ n'akụkụ obi ụtọ, akụkụ ahụ nwere ọ excitedụ nwere ike ịnweta ịma jijiji. A na-ejikarị arụ ọrụ na-eme ka a na-eme ihe na-eme ka a ghara iji ya rụọ ọrụ. A na-ebugharị ihe abụọ ahụ nke na-eme ka ihe dị egwu site na motọ abụọ na-arụ ọrụ nke nwere àgwà yiri ya, na-enweghị mgbatị, ogwe abụọ ahụ nwere eccentric blocks nwere ike ịtụgharị n'akụkụ nke ọzọ na ọsọ ọsọ dịka ụkpụrụ nke mmekọrịta vibration, iji nweta otu- ụzọ excitation ike.
Ọdụdọ vibration eletriki
A na-eri nri nke oge a n'ime eriri na-agagharị iji mee ka eriri ahụ na-ama jijiji n'okpuru ọrụ nke ike eletriki magnet na mpaghara magnet. Ogiri magnetik nke eletrik eletrik eletrik (Fig. 2 [eserese eserese nke eletriki eletriki eletriki]) na-eme site na ugbu a na-agafe na mkpịsị obi ọkụ, wee na-agbanwe ugbu a.
Nhazi usoro ihe omuma
Mgbe etinyere ọkụ eletrik na eriri igwe na-agagharị, ihe na-emegharị ahụ na-emetụta oge a na-emegharị electromagnetic, nke na-eme ka mkpịsị ọbara eje iji mee ka ọ na-emegharị. Enwere ike inweta vibration a na-atụ anya site na ịkpọtụrụ mkpanaka ejector na akụkụ nwere obi ụtọ.
Mgbe oge nke oge a na-abanye n'ime eriri electromagnet, a na-eme ike ọgbụgba oge n'etiti akụkụ obi ụtọ na electromagnet. A na-ejikarị electromagnetic vibration exciter eji arụ ọrụ vibration (Fig 3 [schematic diagram of electromagnetic vibration exciter]) nke a na-ejikọkarị ya na isi electromagnet na armature nwere eriri igwe, a na-etinyekwa mmiri n’etiti etiti igwe na armature. Mgbe eriri igwe na-abanye AC, ma ọ bụ AC gbakwunyere DC, ma ọ bụ mgbe emezigharị okirikiri nke usu ahụ.
Cirit dị egwu
Mgbe etinyere ihe dị ugbu a, enwere ike ịmegharị ikike ịmegharị oge. Ọtụtụ mgbe, a na-edozi armature ahụ ozugbo na akụkụ ọrụ ya ka ọ maa jijiji.
Electro haịdrọlik vibrator
A na-eji valve eletriki hydraulic na-ebugharị site na obere ike eletriki eletriki iji chịkwaa nrụgide hydraulic na pipeline. A na - eme ike dị egwu na piston na hydraulic cylinder, nke mere na akụkụ ndị nwere obi ụtọ nwere ike ịnweta ịma jijiji.
Nke gara aga: SCG ejiji ebufe
Osote: Efere efere
Igwe ikuku na-eme ka ikuku sie ike
Ike nchekwa ọkụ na-atọ ụtọ
Akwa-njupụta myọ na-atọ ụtọ
Atdị Vdị Omume Ọma Ọtọ
Mmanụ Mmanụ-Na-azọpụta Vibration Ọtọ
Mmanụ Mmanụ Mgbapụ na-atọ ụtọ
Atọ-Axis ọma jijiji na-atọ ụtọ
Oke Omume Ọma
Omume ọma jijiji na-atọ ụtọ okirikiri
Mmiri na-eme ka mmiri kpoo ọkụ